Jiolahy raindahiny maro ny efa lavo…: raharahan’ny samy Karana ny ankamaroan’ny “kidnapping” | NewsMada
Nahitam-bokany ny ezaka nataon’ny Zandarimariam-pirenena, ary azo lazaina fa nihena ny ”Raharaha kidnapping”, indrindra fa ny mahakasika ireo teratany karana, na eto an-dRenivohitra na tany amin’ny faritra, taorian’ny nahalavo ireo jiolahy raindahiny… Fanadihadiana…
Raha ny fanadihadiana natao, ny taona 2000, ny nanombohan’ity raharaha fakana an-keriny teratany karana ity ka ry Mahandry (fianakaviana iray ihany i Mahandry sy ary i Steeve, ilay jiolahy maty voatifitra teny Ankerana) ny tena mpitarika ireo jiolahy tamin’izany fotoana izany. Tany am-boalohany, Karana samy Karana ihany ny mpaniraka sy atidohan’ny fanaovana “kidnapping”. Voalaza fa antony roa ny mahatonga izany. Nataon’ireo Karana hakam-bola amin’ny fikambanana misy azy ireo izany ka mahatonga ny sasany amin’izy ireo maka an-keriny ny tenany sy/na mody mampaniraka na manarama olona haka an-keriny azy ireo. Mandritra izany, mitaky volabe ireo Karana mody alaina an-keriny ary efa maty paika sy mipetrapetraka avokoa ny lamina rehetra hanatanterahana izany. Eo koa ny lafim-piainana tsy mitovy ka miteraka sain-dratsy eo amin’ireo Karana sasany. Teraka avy amin’izany ny raharaha fakana an-keriny hitakiana volabe amina miliara. Tsy azo odian-tsy hita rahateo koa fa Karana avokoa ny mitazona ny lafiny toekarena eto amintsika ka misy ifandraisany amin’izany. Vokatr’izany ny nipoiran-dry Mahandry sy ny ekipany rehefa voakarama hanatanteraka fakana an-keriny. Taty aoriana, nahita tsirony (raha izay ny azo ilazana azy) ka nanita-kevitra ry zalahy (ry Mahandry sy namany) ka lasa ry zalahy indray no nanatanteraka izany fa tsy nisy intsony Karana mpaniraka. Nizara roa ireo ekipa mpaka an-keriny: nisy ireo niaraka tamin’i Djaffar Younous sy ekipa iray niaraka amin’i Mahandry, saingy mifameno sy miara-miasa ihany ry zalahy ireto amina raharaha hafa. Fantatra fa misy amin’ny fianakavian’izy ireo no misitraka ny vola azo tamin’ny fakana an-keriny. Ao ireo efa manana tany sy trano ary fiarakodia. Anisan’ny voakasiky ny “Raharaha “kidnapping”” koa ny eny amin’ny faritra iva satria hita taratra ny fisian’ireo trano avo mbola tsy vita hatramin’ny farany izay voaporofo fa tranon’ireo jiolahy mpiara-dia tamin-dry Lama sy namany, araka ny fanadihadiana natao.
Mampitandrina ny Jly Ravalomanana…
Tsy nisy sahy nitoroka ireo teratany karana niharan’ny fakana an-keriny, saingy nanomboka teo amin’ny fotoana nandraisan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Ravalomanana Richard, ny fitantanana no nahasahy nitoroka ireo tompon’antoka amin’izany ireo nalaina an-keriny. “Aoka izay fa tsy te hahalala aho fa na iza na iza ka tratrako manao fakana an-keriny, riatiko fa mampitandrina aho”, hoy ny Seg hentitra amin’ireo jiolahy mbola manana eritreri-dratsy hanohy ity fakana an-keriny ity. Nanentana mihitsy aza izy ny hampitsarahana izany satria rehefa lany vola ireo Karana ireo, hivadika aty amintsika Malagasy indray ity raharaha ity, araka ny nambarany. Fantatra aza fa nisy amin’ireo tandapa tamin’ny fitondrana teo aloha no tafiditra ao anatin’ity “Raharaha fakana an-keriny” ity, manginy fotsiny ny fisian’ireo mpitandro filaminana niray tsikombakomba ka antony nahatonga ity manamboninahitra eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena ity ho hentitra manoloana izao raharaha izao.
“Miasa mangina ny zandary…”, hoy ny lehiben’ny Secres
Nanamafy ny lehiben’ny sampana fikarohana heloka bevava eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena (Secres) Fiadanana, ny Kly Ravelomanana Tahina, fa misy ny fakana an-keriny an-dRenivohitra sy any ambanivohitra. Nohamafisin’ity manamboninahitra ity fa raha tsy misy ny ezaka, tsy foana mihitsy ity resaka fakana an-keriny ity. “Ahoana anefa ny hitazonana izany tsy hiverenan’ny “kidnapping” intsony?”, hoy izy. “Misy asa tao ambadiky ny tsy fisian’ny “kidnapping” intsony, saingy tsy fantatry ny olona izany. Izahay eto anivon’ny zandarimariam-pirenena dia miasa mangina mba tsy hisy intsony izany fakana an-keriny izany”, hoy izy. Voaara-maso akaiky koa na ireo any am-ponja na ireo nahazo fahafahana vonjimaika.
“Fakana an-keriny amin’ny endriny hafa indray…”, hoy ny CFOIM
Nambaran’ny eo anivon’ny fikambanan’ireo teratany karana mizaka zom-pirenena frantsay miasa sy monina eto amintsika (CFOIM) fa nilamina tanteraka ity “Raharaha fakana an-keriny” teratany karana ity taorian’ny nahafaty an’i Lama, ilay jiolahy lehiben’ireo mpaka an-keriny. Na eo aza anefa izany, misy ihany ireo fakana an-keriny amin’ny endriny hafakely ataon’ireo Malagasy sasany toy ireny niseho tany Manjakandriana ireny.Tsy mitovy amin’ny fakana an-keriny ataon-dry Lama sy ny ekipany anefa izany satria tsy mitaky volabe amina miliara ireo jiolahy fa farafahabetsany, 10 tapitrisa Ar, ny takin’ireo mpaka an-keriny. Amin’iny faritr’i Maevatanàna, i Tsaratanina, i Tsiroanomandidy, Anjorozobe iny no tena ahitana fakana an-keriny amin’ny endriny hafa ity.
Nanatontosa : Jean Claude sy Fanou
Toy izao ny vokatra azon’ny Secres momba ny “Raharaha fakana an-keriny” : Miisa 74 ireo olona voasambotra ka 36, naiditra am-ponja vonjimaika (nahitana zandary telo sy tafika roa), nahazo fahafahana vonjimaika (LP) 12, valo maty voatifitra, eo ambany fanaraha-mason’ny fitsarana roa. Ireo fitaovam-piadiana tratra kosa: PATT iray, basy vita gasy enina, PA cal 22 long rifle iray, PM type ISI iray, PA cal 7.65 marika Gevelot iray, PA Makarov iray, PA marika Luger iray, grenade telo, boîte chargeur AKM 12, bouchon allumeur roa, fiarakodia nogiazana miisa enina.